Luyinzukazikeyi olokuvulwa kwezikole - Ilanga News
Home Izindaba Luyinzukazikeyi olokuvulwa kwezikole
Luyinzukazikeyi olokuvulwa kwezikole
iSIMEMEZELO sikaNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga ngodaba lokuthi kungensuku zatshwala zingase zivulwe izikole, inqobo nje nxa konke sekumi ngomumo ngohlelo lukahulumeni lokuzivikela empini ye-coronavirus, siyefana nokuhosha izikhuni eziko unogwaja ungakavuthwa.
ISIMEMEZELO sikaNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, ngodaba lokuthi kungensuku zatshwala zingase zivulwe izikole, inqobo nje nxa konke sekumi ngomumo ngohlelo lukahulumeni lokuzivikela empini ye-coronavirus, si-yefana nokuhosha izikhuni eziko unogwaja ungakavuthwa.
Ngenxa yokuba kwaziwa ngabantu bonke ukufekela kwemizamo kahulumeni ukufeza izidingo zabantu, futhi okufakazelwa yimibhikisho yomphakathi ezindaweni ezahlukene, akuqondakali ukuthi kungabe lesi sithembiso ngokuvulwa kwezikole uNkk Motshekga usenze esezicubungulisisile zonke yini izethulo zababambe iqhaza kwezemfundo.
Uyihlabe esikhonkosini umbono wephephandaba ILANGA LangeSonto izolo oxwayisa uhulumeni ngokuthi ingwijikhwebu ngesinqumo sawo ngogwayi, izokwehlisa ukwethenjwa kukaMengameli Cyril Ramaphosa.
Nakuba lizwakala iphuzu elibekwa yiziphathimandla elithi akekho oseke wahlangabezana nalesi simo segciwane phambilini, nokho ezinye izinqumo ngokumele kwenzeke zidala isidididi ngokungadi-ngekile.
Kwelanamuhla sinekela abafundi ngokuthi zimi kuphi izinyunyana zothisha ngesinqumo sikaNgqongqoshe Motshekga. Lokhu okulandelayo ngezinye zezinto izinyunyana ezifuna ungqongqoshe azichushise kuzo ngaphambi kokuba zimeseke odabeni lokuvulwa kwezikole:
Zithi zizibonile izinsuku azinqumile maqondana nokuvula izikole:
Ngokusho kukangqongqoshe uhlelo lwakhe ngokuvulwa kwezikole lwesekeleke elwazini lwesayensi, ngakho yizinsuku lezi eziyingxenye yesivumelwano sakhe nabantu baseNingizimu Afrika.
Izinyunyana zithi lezi zinsuku azimeme-zelile yizona umphakathi nazo (izinyunyana) abazosizakala ngazo ekubophezeleni ungqongqoshe maqondana nokuthunyelwa kwezimfanelo ezidingekayo ekulweni nokusabalala kwe-coronavirus phansi kohlelo lokwethulwa kwemfundo.
Zithi futhi lezi zinsuku zizosetshenziswa yizinyunyana ukubheka ukuthi luhamba kanjani uhlelo ngemibandela engaphikiswa ngokweqhinga lokuvulwa kwezikole.
Zigcizelele ubumqoka balezi zinsuku ezishiwo ngoba ongoti be-curriculum na-bezempilo baqinisekise ungqongqoshe ukuthi mhla ka-11 kuNhlaba (May) 2020 konke kuyobe sekumi ngomumo ngoba amathimba aqondene nokuphathwa kwe-zikole, School Management Teams (SMT) kudingeka nakanjani abuyele ezikoleni.
Umsebenzi walawo mathimba ngokwesimemezelo sikangqongqoshe ayobe eselandelwa ngabafundi ukubuyela esikoleni mhla ka-1 kuNhlangulana (June) uma izinto zihamba kahle wukuhlela ama-time table nokuthi othisha nabasizi bazokwamukelwa kanjani.
“Kumqoka kakhulu ukuba iqinisekiswe indaba yokuphepha kwabo kwezempilo,” kusho isitatimende. Akusiwona umsebenzi wamaSMT ukubhekela indaba yengqalasizinda, ukulungiswa komonakalo ezakhiweni zezikole nokufaka izibulalimagciwane (sanitizers), lokho kuwumsebenzi womnyango wezemisebenzi yomphakathi noma wophiko lwezingqalasizinda ngaphansi komnyango wezemfundo.
AmaSMT kuyomele akufakazele konke okusohlwini losekwenziwe futhi abone ukuthi nebala othisha nabasizi sebengabuyela yini emsebenzini. “Ngakho-ke sinxusa amahhovisi abahloli ezifundeni ukuba angayaleli ukuba othishanhloko baye emahhovisi amasekethe ungakashayi umhla ka-11 kuNhlaba.
Othishanhloko bayokwamukeliswa izifonyo emuva kwalolo suku futhi emuva kokuba sebehloliwe yiziphathimandla zezempilo ezikoleni njengokusho kweqhinga (likangqongqoshe),” kusho isitatimende.
Kumele othishanhloko bafice ama-sanitizer esefakiwe ezikoleni. AmaSMT kuyo-mele abizwe mhla ka-12 kuNhlaba nxa konke okudingekayo sekuphelele. Kunjalo nje, amaSMT kuyomele ahlolwe (screened) nsuku zonke yizisebenzi zezempilo futhi kuhlelwe ukuthi ibanga lokuqhelelana lizokwenzeka kanjani bese lihlela ukubuyela kothisha ezikoleni.
Ukuze kube nokuqonda ngokuvulwa kwamahhovisi ezifunda nawamasekethe nesibalo esidingekayo sezisebenzi, izinyunyana zithi zicela kube nomhlangano ophuthumayo nongqongqoshe.
Ngokwesitatimende sezinyunyana, zicele umhlangano phakathi konobhala bazo ezifundazweni nongqongqoshe bezemfundo isifundazwe ngasinye. Sithi futhi le mihlangano kumele yenzeke lungakashayi uLwesithathu lomhla ka-6 kuNhlaba, bese kuthi mhla ka-10 zibe nomhlangano wokugcina noNgqongqoshe Motshekga ukuba kuyofa-kazwa ngokuphelela kwezinto ezidingekayo ezikoleni.
“Nxa ingekho inqubekela phambili ukuze kube sobala konke kuyomele ungqongqoshe amemezele esizweni ngezizathu zalokho nokuthi izinselelo kuzobhekwana kanjani nazo. Izisebenzi akulindelekile ukuba zibuyele emsebenzini ngoba kuyobe kungaphephile. Umthetho uthi umqashi makenze isiqiniseko ngokuphepha kwezisebenzi endaweni yokusebenza,” kuqhuba isitatimende sezinyunyana.
Izinyunyana zibuye zacela ukuba ungqongqoshe akhiphe incwadi enayo yonke imininingwane ukuze kusizakale amahhovisi amasekethe, awezifunda nawekomkhulu lomnyango. Zithi lokho kumele kuhlinzekele nezisebenzi ezizobuyela namuhla mhla ka-4 kNhlaba emsebenzini.
Zicela nokuthi ungqongqoshe aveze imininingwane yemiyalo mayelana nokuthi kuzomiswa kanjani ngezikole zabanezidingo eziqondene nabakhubazekile, izinkulisa, izisebenzi ezinezimo eziphila nazo nangalabo asebekhulile ngeminyaka yobudala.
Kumele futhi leyo mininingwane icacise ngezimo zokukhulelwa futhi kumele imiyalo icacise ngezikole ezididiyele amabanga emfundo ephansi nephakeme ukuthi kuzomiswa kanjani ngabafundi baGrade 7 nabakaGrade 12 uma bezokuya ngalusuku lunye esikoleni. Zithi kuzomele icacise nangezikole ezinabafundi abahlala emahostela azo.
Ukucacisa lelo phuzu, isitatimende sezi-nyunyana sikhomba imibandela ewu-6 ebekwe yiWorld Health Organisation (WHO) okumele kuhlangatshezwane nayo ngaphambi kokuba uhulumeni uhoxise le midiyo (restrictions) emiselwe iCovid-19 mayelana nokubuthana nokunyakaza kwabantu emphakathini:
∗ ukuthelelana ngesifo makube sezi-ngeni elilawulekayo;
∗ izinhlelo zezempilo mazibe sezikwazi ukuhlonza, ukuhlola nokwahlukanisa fu-thi kwelashwe lowo nalowo osethelelekile nokuthola bonke abake bathintana naye;
∗ kuncishiswe ingozi ezindaweni ezibucayi njengalezo okugcinwa kuzona aba-ngasindi ekuguleni;
∗ izikole, izindawo zokusebenza nezinye ezibalulekile mazibe nezindlela zoku-zivikela;
∗ makulawuleke isimo sokufika endaweni kwegciwane elivela ngaphandle;
∗ umphakathi mawube ngosufundise-ke ngokwanele futhi waba nolwazi lokubhekana nezimo ezintsha zempilo.
“Iphuzu lesine liholele ekutheni abalwe wonke amaphuzu e-WHO okumele abhekelwe, kwazise izwe lisesesigabeni 4 sokuva-lwa kwalo),” kuqhuba sona isitatimende sezinyunyana.
Previous articleUbonga amaciko ngokumeseka esemanzini
Next articleimbumba inikelele abahlwempu